Ikhaya - Utter Technology
I-UtterTechnology ingelinye lamabhulogi amahle kakhulu wokufundisa wamahhala Amathiphu Namasu mayelana Nobuchwepheshe obufana nefu, Imidlalo, Amaselula, i-IoT, Ukumaketha Kwedijithali nezinye izigaba eziningi. Ngizoqhubeka ngengeza eminye imikhakha uma kunesidingo. Izihloko zingaba usizo kakhulu empilweni yakho yansuku zonke namuhla egxile Ezobuchwepheshe. Hlala ubukele le bhulogi ukuze uthole izibuyekezo ezengeziwe.
Izwi Lanamuhla #337 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 21, 2022 Kwangathi 21, 2022
I-Wordle ihlasele umhlaba wonke, futhi noma ungakawudlali umdlalo wansuku zonke, ngokungangabazeki uzibonile izikwele ezingabonakali kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Ngaphambi kokudalula isixazululo,…
Izwi Lanamuhla #336 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 20, 2022 Kwangathi 21, 2022
Izwi Lanamuhla #335 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 19, 2022 Kwangathi 19, 2022
Izwi Lanamuhla #334 Ithiphu Nempendulo
Izwi Lanamuhla #333 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 17, 2022 Kwangathi 17, 2022
Izwi Lanamuhla #332 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 16, 2022 Kwangathi 16, 2022
Izwi Lanamuhla #331 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 15, 2022 Kwangathi 15, 2022
Ungayisebenzisa kanjani i-Amazon Echo ukulalela ama-Apple Podcasts
I-Amazon Echo ingaba isizinda sakho konke ukuzijabulisa ekhaya lakho. Lokhu kuhlanganisa ukulalela amaphodikasti, umculo, nanoma yini enye edlala umsindo ku-Fire TV yakho.
Amakhono nendaba: I-Apex Legends Mobile Fade
U-Ignacio Huaman, owokuqala kwabaningi be-Apex Legends Mobile-First Legends, Fade. Kuze kube yilapho engezwa ochungechungeni oluyinhloko lwe-Apex Legends, i-Fade izotholakala kuphela ku-Apex Legends...
Amakhredithi amahhala anamakhodi e-Military Tycoon angoMeyi 2022
Ngabe ufuna amakhredithi amahhala ku-Military Tycoon Roblox? Kulesi sihloko sihlinzeka ngamakhodi e-Military Tycoon kaMeyi 2022 ukuze uthole amakhredithi amahhala. Manje ungasebenzisa okuningi…
Amakhodi we-Pet Simulator X (May 2022): Amadayimane Amahhala, I-Coin Boost ne-Gingerbread
Thola wonke amakhodi ahlengayo omdlalo we-Roblox omibalabala nojabulisayo we-Pet Simulator X ukuze uthole Amadayimane amahhala, Ama-Coin Boost, nokunye okwengeziwe. Ufike endaweni efanele uma...
Amakhodi we-Roblox Project Ghoul (May 2022) - Ama-spins wamahhala kanye ne-boost
Amakhodi e-Roblox Project Ghoul angakusiza ukuthi uthole i-XP ngokushesha ngokukunikeza ama-spins wamahhala, ama-boost, nokunye okwengeziwe kugeyimu. Ku-Project Ghoul, ungakhetha ukuba...
Izwi Lanamuhla #327 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 11, 2022 Kwangathi 15, 2022
I-Wordle ihlasele umhlaba wonke, futhi noma ungakawudlali umdlalo wansuku zonke, ngokungangabazeki uzibonile izikwele ezingabonakali kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. U-Wordle uthathe…
Izwi Lanamuhla #324 Ithiphu Nempendulo
Kwangathi 9, 2022 Kwangathi 15, 2022
Izindlela ezi-7 zokulungisa Umculo we-Instagram ungasebenzi
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bayanda abantu abathole ukuthi kwesinye isikhathi abakwazi ukwengeza umculo ku-Instagram. Ikakhulukazi, isitikha somculo Ezindabeni ze-Instagram asisebenzanga…
Ungalithwebula Kanjani Ikhasi Lewebhu Lonke ku-iPhone noma i-iPad
I-iOS ye-Apple inesici esakhelwe ngaphakathi esikuvumela ukuthi uthathe izithombe-skrini. Lesi sici futhi sikuvumela ukuthi uthwebule lonke ikhasi lewebhu ku-iPhone noma i-iPad yakho, ongaligcina…
Idlalwa kanjani iRoblox kuNintendo Shintsha
I-Roblox iyinkundla yokudlala ye-inthanethi edumile evumela abantu ukuthi benze eyabo imidlalo engadlalwa yinoma ngubani. Izigidi zabantu zidlala inqwaba yemidlalo endaweni yesikhulumi,…
Uyenza kanjani amandla imodi emnyama kuhlelo lokusebenza leselula le-Wikipedia noma iwebhusayithi
Noma iyiphi idivayisi ingafinyelela i-Wikipedia ngemodi emnyama. Uma usebenzisa i-Wikipedia kakhulu, isizinda esimhlophe sesayithi cishe siyashiswa engqondweni yakho. Isiza senziwa ukuthi sibukeke silula ngamabomu.
U-Zelle uphephile ukuthi angathumela futhi amukele imali kubantu abathenjwayo
Ungathumela imali kumuntu omaziyo nomethembayo usebenzisa uZelle. U-Zelle ujoyine izinsizakalo ezifana ne-PayPal ne-Venmo ngo-2017 njengendlela elula yokuthumela nokwamukela imali ngefoni yakho.
Uwakhipha Kanjani Amanothi Nokuthunyelwe Okusekelwe Embhalweni ku-Facebook
I-Facebook yenza ithuluzi elenze kwaba lula kunangaphambili ukuthi abantu bashiye inkundla yokuxhumana ngaphandle kokuthi basuse okuqukethwe kwabo unomphela.
Unezinkinga ngohlelo lokusebenza lwe-Amazon? Izindlela ezi-7 zokuxazulula inkinga
Kwangathi 13, 2022 Kwangathi 13, 2022
Ngohlelo lokusebenza lwe-Amazon, ungathenga futhi uphequlule, wenze ama-oda aku-inthanethi, uhlole isimo se-oda, futhi uthole isaphulelo ezitolo eziphethwe yi-Amazon njenge-Whole Foods. Nini…
Uzigcina kanjani izikhombisi-ndlela ze-Google Maps ocingweni lwakho ukuze uzisebenzise ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngenkathi ushayela
Kwangathi 12, 2022 Kwangathi 12, 2022
Sebenzisa i-Google Maps ngaphandle koxhumano lwe-inthanethi ngokulanda izikhombisi-ndlela.Uma usendaweni engenalutho futhi ungenakho ukufinyelela ku-inthanethi, i-Google Amamephu ingumsindisi wempilo. Lokhu…
© 2022 Utter Technology • Yakhiwe nge GeneratePress